शोभा शर्मा काठमाडौँ, साउन १२
दाहालका वकिल दिनमणि पोखरेलले बहस सुरु गर्दै भने, 'बेन्चलाई मेरो आग्रह छ, भोलिका दिनमा यो निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाहरुका लागि जुरिसडिक्सन जुरिसप्रुडेन्स बन्ने गरी आदेश होस्। यो विवादमा आयोगको निर्णयमा कानुनी त्रुटि छन् कि छैनन् भन्ने पनि हेरियोस्।'
'९० मत च्यात्ने काम भएको छ। त्यो अबरोध कब्जा भयो की भएन?' उनले भने, 'बल प्रयोग गरेर वा नगरेर मतगणनास्थल कब्जा भए पुनः मतदान हुन सक्ने भन्ने दफा ५० को व्यवस्थालाई आयोगले आफ्नो निर्णयआधार बनाएको छ। जसमा कानुनी त्रुटि देखिन्न।'
रिट निवेदक पक्षका धेरै वकिलले माओवादी प्रतिनिधिले बाँदर झैँ उफ्रेर मतपत्र च्यातेको भन्दै इजलासमा कटाक्ष गरेका थिए। अधिवक्ता पोखरेलले त्यसैको जवाफ दिदैं भने, 'बाँदर हिँडेको तरिकाले होस् या भैँसी, गणनामा असर हुने गरी मतपत्र च्यातिन्छ भने त्यो कब्जा भएको मानिन्छ।'
उनले यसमा थप भने, 'मतगणनास्थल कब्जा भएपछि फेरि मतदान गर्नुपर्छ। यो जनताको सम्मानको विषय हो।'
'रिट निवेदकका साथीहरुले आयोगको निर्णयमा बद्नियत छ भन्नु भएको छ। बद्नियत कहाँ छ देखाउनु परेन?' उनले भने, 'मतपत्र च्यातिइसकेका छन्। अब कुन दलको कुन नियत थियो, कुन उम्मेदवारको के-के थियो भन्ने असान्दर्भिक कुरा हो।'
अर्का अधिवक्ता गुणराज घिमिरेले पनि आयोगको निर्णयकै बचाउ गरे। 'आयोगले गरेको निर्णयले संविधानवाद र कानुनी शासनलाई उल्लघंन गरेको छैन,' उनले भने 'सम्मानित बेन्चले हेर्न पर्ने ९० मतको नोक्सानबारे हो। जबरजस्ती च्यातिएको छ, त्यसैले पुनः मतदानबाटै त्यसको पूर्ति हुनुपर्छ।'
त्यस्तै रिट निवेदन दिने उम्मेदवार नै आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'जनता सार्वभौम हुन्छ। जनताले भोट मार्फत त्यसको एक्सरसाइज निर्वाचनमा गर्छ। सत्ताको हस्तान्तरण त्यही ब्यालेट बक्समा भैरहेको हुन्छ,' उनले भने, 'त्यही ब्यालेट बक्समा प्रश्न उठ्छ भने उम्मेदवार अदालत आउनुपर्ने हो, आउनुभएको छैन। त्यसैले यो रिट बदर भागी छ।'
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १२, २०७४, ०८:१५:०५